XAAJI CALI YUSUF IMANKEEY OO KU GEERIYOODAY MAGAALADA ROCHESTER, MINNESOTA USA.
Monday March 09, 2015 - 22:19:19 in Wararka by Web Admin
Inaa Lilaahi wa inaa ileehi Raajicuun, Allaax Unaxariiste waxa Magaalada Rochester ee gobolka Minnesota ee Mareykanka ku geeriyooday Xaaji Cali Yuusuf Iimaankey oo siweyn looga yaqiinay gudaha iyo dibada dalka Soomaaliya.
Dhamaan Culumaa'udiinka reer Warsheekh iyo guud ahaan jameecada reer Sheekh C-raxman Sheekh Cumar (Sheekh Cabdi Celli) waxey tacsi tiiraanyo leh udirayaan dhamaan ehelka iyo qaraabadi oo ku geriyooday Xaajiga inuu samir iyo iimaan kasiiyo, Xaajigana Qabrigiisa nuur iyo raxmad eebe kusiiyo.
Tacsi tan lamid ah ayaa waxa diyaraya dhamaan maamulka iyo shaqaalaha Shabakada Warsheekh iyadoo ehelka iyo qaraabadi uu ka tagay marxuumka Alle looga tuugay inuu samir iyo iimaan kasiiyo, marxuumkana uu ka waraabiyo janatu Fardowso.
Dhanka kale waxa la ogeysiinayaa Umada Muslimiinta gaar ahaan Dadka Soomaaliyeed in janaasada xaajiga lagula dukaday wadanka Mareykanka
MAALINTII ARBACADA TAARIIKHDUNA AHEED 4/3/2015. isla markaana Xaajiga la aasi doono MAALINTA JUMCADA TAARIIKHDUNA TAHAY 13/3/2015 ayaa waxa lagu duugi doono isla magaalada Muqdisho.
28/06/2021 - 21:43:46
Wararki ugu dambeeyay dagaal kasocda Magaalada Baladweyne
05/05/2021 - 16:31:16
Midowga Yurub: Ciidamada Magaalada Muqdisho halaga saaro.
03/05/2021 - 13:30:26
Wararki ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho iyo wafdiga dalka Qatar. (Sawiro
Wararki ugu dambeeyay iyo militarigi soo galay Magaalada Muqdisho
30/04/2021 - 13:28:53
War deg deg ah, Dagaal qaraar oo iminka ka socda magaalada Muqdisho
25/04/2021 - 16:31:28
MacKenzie Scott: Ninka dunida ugu taarjirsan ayeey ka raacday Macalin Iskuul
08/03/2021 - 12:08:34
27/11/2018 - 09:26:26
Cabdiweli Cali Cilmi Yare oo ku geeriyooday weerar ka dhacay Magaalada Gaalkacyo
26/11/2018 - 08:57:05